NIN CULUS: Rugcadaagii Barcelona Xavi oo DOONIDIISA qaaliga ah ee raaxada ugu deeqay Qoxootiga si ay uga gudbaan badda – Gool FM
NIN CULUS: Rugcadaagii Barcelona Xavi oo DOONIDIISA qaaliga ah ee raaxada ugu deeqay Qoxootiga si ay uga gudbaan badda
(Qatar) 01 Agoosto 2016. Kabtankii hore ee kooxda Barcelona Xavi ayaa doonidiisa gaarka ah ee raaxada misane qiimaha badan ku fadhisa ugu deeqay qaxootiga si ay ugu gudbaan badda Mediterranean.
Xiddiga qadka dhexe ee reer Spain ee iminka ka ciyaara horyaalka dalka Qatar ayaa furaha doonidiisa usbuucan gacanta u galiyay ururka aan dowliga ahayn ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano (POA).
NGO-gan heeganka u ah inuu bad baadiyo nolosha dadka badda isku haligaya ayaa iminka saldhig u ah Lesvos halkaa oo ay ku caawinayaan qaxootiga isku dayaya inay soo galaan dalka Giriiga (Greece).
Haseyeeshee, Doonida Xavi ayaan loo isticmaali doonin in dadka looga daabulo badda, laakiin waa la iibin doonaa walib xaraash si lacagaha ka soo boxo loogu caawiyo qaxootiga.
Muuqaal ay (POA) soo dhigeen Facebook ayay ku sheegeen sheekadan iyagoona uga mahad celiyay Xavi talaabada uu qaaday waxayna sheegeen inay tani bad-baadin doonto dad badan.
36-jirkan ayaa u saftay Barcelona 767-kulan muddo dheer uu la joogay kooxda ka dhisan Catalonia wuxuuna u dhaliyay 85-gool, halka uu xulkiisa Spain u saftay 133-jeer muddooyinkii u dhexeeyay 2000 ilaa 2014 wuxuuna u dhaliyay 13-gool.
Romelu Lukaku oo saaxiibadiisa Everton u sheegay inuu doonayo Chelsea